Ikhaya elinomtsalane le-Memphis - I-Airbnb
Ikhaya elinomtsalane le-Memphis
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShawn
Ukhangela ikhaya lakho elikude nekhaya eMemphis? Le yindawo efanelekileyo kuwe! IMemphis likhaya lezinto ezininzi ezinomtsalane ezifana neGraceland, iNational Civil Rights Museum, iMemphis Zoo, nokunye okuninzi!! Kwimizuzu eyi-25 ukusuka edolophini, le yindawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuba kufutshane ngokwaneleyo, kodwa kude ngokwaneleyo, ukuze bonwabele uxolo kunye nokuzola emva kokuzikhupha ebusuku kweMemphis. Le yindawo entle yokuhlala enoba uhamba wedwa, okanye nentsapho okanye abahlobo.
Uza kuyisebenzisa ngokupheleleyo indlu enomgangatho omnye. Kukho indawo eninzi yokuhlalisa iindwendwe eziya kutsho kweziyi-6.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu, indawo yokufaka impahla negumbi lokuhlambela elikhulu. Igumbi lesibini linebhedi emibini ngoxa igumbi lesithathu linebhedi enkulu. Ibhafu yesibini ayikho kula magumbi okulala amabini.
Kukho i-WiFi kwaye igumbi lokuhlala line-TV onokuyisebenzisa. Ikhitshi linezitya, iimbiza, iipani, njl. Kukho neyadi enamagumbi aliqela apho ungaya khona ukuze uphole okanye ubukele ukutshona kwelanga.
4.85 · Izimvo eziyi-165
* Absolutely no parties or large social gatherings allowed.
Ukuzibhalisa xa ufika. Ukuba kukho nantoni na efunekayo, ndiyakwazi ukufikelela lula.